Nhau - Musiyano uripo Pakati PeMachira Akasiyana, Nei Masisitimu eAntistatic Achisarudza Polyester?
Inowanzozivikanwa sekotoni. Iyo fiber inoshandiswa kune machira uye quilt. Cotton faibha ine simba rakakwira, yakanaka mweya kubvumidzwa, yakashata kuunyana kusagadzikana uye yakashata tensile pfuma; ine yakanaka kupisa kupisa, yechipiri chete kune hemp; ine murombo asidhi inodzivisa, uye inoshingirira kudzikamisa alkali pane tembiricha yemukati; ine hukama hwakanaka hwemadhayi, nyore kudhaya, yakakwana chromatogram uye yakajeka ruvara. Kotoni yerudzi rwejira inoreva jira rakagadzirwa neshinda yedonje kana donje uye donje mhando kemikari fiber yakasanganiswa shinda.
Hunhu hwemachira ekotoni:
1. Iyo ine yakasimba hygroscopicity uye yakakura shrinkage, ingangoita 4-10%.
2. Alkali uye acid kuramba. Mucheka wedonje hauna kugadzikana kune inorganic acid, kunyangwe yakasarudzika sulfuric acid inoiparadza, asi organic acid haina simba, ingangoita isina kukuvadza. Jira rekotoni rakanyanya kugadzikana nealkali. Kazhinji, sanganisa alkali haina zvainoita pamucheka wedonje patembiricha yemukati, asi simba rekotoni jira rinoderera mushure meakasimba alkali mhedzisiro. Iyo "mercerized" machira ekotoni anogona kuwanikwa nekurapa machira ekotoni ne20% caustic soda.
3. Chiedza kupokana uye kupisa kupisa zvakajairika. Muzuva nemuchadenga, jira rekotoni rinogadzirwa zvishoma nezvishoma, izvo zvinoderedza simba. Mucheka wedonje unozokuvadzwa neyakareba tembiricha chiito, asi inogona kumira kwenguva pfupi tembiricha yekurapa 125 ~ 150 ℃.
4. Microorganism ine zvinokuvadza pamucheka wedonje. Haisi inodzivirira kuumbwa.
Cotton polyester imhando yemucheka wakasanganiswa nedonje uye polyester. Iine kakotoni kadiki. Hunhu hwekotoni polyester zvine zvese zvakanakira donje uye polyester. Ko donje fiber ichave musanganiswa wedonje uye nylon? Cotton faibha rudzi rwakachinjwa polypropylene fiber. Iyo yakakosha yekumwa mhedzisiro yekotoni fiber inoita kuti ive nyoro, inodziya, yakaoma, hutsanana uye inorwisa mabhakitiriya. Iyo yepamusoro yekotoni fiber yemukati, mbatya, T-shati uye zvimwe zvigadzirwa zvakagadzirwa uye zvinogadzirwa neyekushandisa modhi zvine zvakanakira kupisa kupisa, kunwa mvura, unyoro conduction, kukurumidza kuomesa, antibacterial uye zvimwe zvinhu.
Spandex ndiko kupfupiswa kwe polyurethane fiber, iri rudzi rweyakagadziriswa fiber. Iyo yakasununguka zvakanyanya uye inogona kutambanudza ka6-7 nguva, asi inogona kukurumidza kudzokera kune yayo yekutanga mamiriro pamwe nekutsakatika kwemhirizhonga. Chimiro chayo chemolekyuli iketani senge, yakapfava uye yakawedzera polyurethane, iyo inosimudzira zvivakwa zvayo nekubatana neyakaomesesa cheni chikamu.
Spandex ine yakasarudzika kusimba. Simba iri rakapetwa ka2-3 pane iro reruva fiber, kuwanda kwemitsara zvakare kwakanyanyisa, uye inopokana nekushatiswa kwemakemikari. Spandex ine yakanaka acid uye alkali kuramba, ziya kudzivisa, mvura yegungwa kuramba, yakaoma yekuchenesa kuramba uye kupfeka kuramba. Spandex haigone kushandiswa yega, asi shoma yacho inosanganiswa mumucheka. Mhando iyi yefaibha ine zvimiro zvese zviri zviviri rabha uye faibha, mazhinji acho anoshandiswa mumucheka wepakati wakarukwa nespandex sepakati. Iyo zvakare ine spandex isina kusimira silika uye kumonyanisa silika yakagadzirwa nespandex uye imwe tambo. Zvinonzi ainyanya kushandiswa siyana yakarukwa dzakarukwa, weft dzakarukwa micheka, dzakarukwa micheka uye kwakavharwa nenyama micheka.
Terylene yakasarudzika yakakosha yezvakagadzirwa fiber, rinova iro zita rekutengeserana re polyethylene terephthalate polyester fiber, inonyanya kushandiswa kumachira. Dacron, inowanzozivikanwa se "Dacron" muChina, inoshandiswa zvakanyanya mukugadzira machira ekupfeka uye zvigadzirwa zvemumaindasitiri. Polyester ine chimiro chakanakisa. Iyo yakapetwa, yakasviba kana yakapetwa yeta polyester kana jira rakagadzirwa mushure mekumisikidzwa rinogona kugara kwenguva yakareba mushure mekugezwa kakawanda mukushandisa. Polyester ndeimwe yeaya matatu ekugadzira tambo ine akapusa tekinoroji uye mutengo unodhura. Uye zvakare, ine yakasimba uye yakasimba, yakanaka kusimba, isiri nyore kuumbika, isingagadzike ngura, kuputira, crisp, nyore kushamba uye kuoma, nezvimwewo, izvo zvinodikanwa nevanhu.
Kune yezvazvino indasitiri yezvikafu, microelectronics indasitiri, marasha indasitiri, yekudhinda indasitiri uye zvichingodaro, anti-kunofambira mberi zvipfeko zvinoshandiswa zvakanyanya mukati mavo, uye inoita chinoshingairira kurwisa-kunofambira mberi.
Sezvo isu tese tichiziva, seyakadzika yeanopokana-static zvipfeko: anti-static yakachena jira, kusarudzwa kwayo kunokanganisa anti-static mhedzisiro yeanopokana-static zvipfeko. Somumwe Anti-kunofambira mberi nakisisa machira yakachena, polyester jira chakagadzirwa polyester filament uye ipapo conductive faibha iri yakarukwa longitudinally uye latitudinally, iyo chakagadzirwa inokosha kugadzira michina. Icho chikonzero nei Xiaobian achikurudzira iwe kuti usarudze polyester anti-static machira ndeyekuti haingori chete ine yakanaka anti-static basa, asi zvakare zviri pachena inodzivirira iyo feni fiber kana guruva rakatsetseka kuti riwire kunze kwejira rejira, uye ine hunhu hwepamusoro kupisa kupisa uye kushambidza kushambidza; Inoshandiswa zvakanyanya mukamuri yakachena yeGiredhi 10 kusvika Giredhi 100. Inoshandiswa zvakanyanya mu microelectronics, optoelectronics, zvigadzirwa zvakanaka uye mamwe maindasitiri anokanganiswa nemagetsi emagetsi uye anoda hutsanana hwakanyanya.
Nekuti polyester fiber pachayo yakareba kwazvo, saka hazvisi nyore kuburitsa machira emvere, uye iyo jira diki yakakura, ine yakanaka guruva-chiratidzo mhedzisiro. Iyo electrostatic yekudonhedza mhedzisiro yejira ndeyekuti mukati memucheka wakasungirirwa netambo inoitisa (kabhoni fiber waya) yedaro rakaenzana, kubva pa0.5cm kusvika 0.25cm.